बबरमहलको यो भवन अब, कस्ले कब्जा गर्ला ? « News24 : Premium News Channel
बबरमहलको यो भवन अब, कस्ले कब्जा गर्ला ?
काठमाडौं । बबरमहलको यो सिसैसिसाको भवन कब्जा गर्ने होडाबाजीमा छन्, दुई समूह । पहिलो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकटका कर्मचारी नेता । दोस्रो एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट कर्मचारी नेता । भवन हो, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको । जुन भवन एमाले फुटेपछि तानातान अवस्थामा छ ।
सिंह्दरबारको मुखैमा रहेको उक्त भवन आफ्नो रहेको भन्दै दुवै समूहले दाबी गरेपछि झडप नै भएको छ । सोमबार दुवै समूहका कर्मचारी नेताहरु संगठनको भवनका आधिकारिता आफ्नो रहेको भन्दै पुगेका थिए । आधिकारिकताका साथ भवनमा पुगेका दुवै समूहका कर्मचारी नेताहरु अन्ततः जुध्न पुगे ।
भवन विवादमा दुई समूहका कर्मचारी नेताहरुबीच झडप भएपछि प्रहरी नै आएर उनीहरुलाई भ्यानमा कोचेको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेका ओलीनिकट कर्मचारी नेताहरुलाई वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार र नेपालनिट कर्मचारी नेताहरूलाई प्रदर्शनीमार्गस्थित पुलिस क्लबमा हिरासतमा राखियो ।
संगठनको ओली पक्षधर खेमाको बैठकले अध्यक्षमा केदारप्रसाद देवकोटालाई चयन गरेको छ भने माधव नेपाल खेमाले पूर्व महासचिव रेवन्त गौतम अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।
संगठनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ओली समूहका केदार देवकोटालाई पठाउने निर्णय भएको छ भने नेपाल समूहबाट मोहन घिमिरेलाई पठाउने निर्णय भएको छ ।
एमाले फुटेपछि फुटेको कर्मचारी नेताहरुले एक अर्काको समूहलाई कारवाही गर्दै संगठन र ट्रेड युनियनमा कर्मचारी नेता चयन गरेको छ । तर, वास्तवमा को आधिकारिकता हो ? भन्ने विवाद भने झन् चर्कदो छ ।
यसैबीच घिमिरे पक्ष आधिकारिकता दाबी गर्दै श्रम कार्यालयमा गएको छ । गौतम नेतृत्वको संगठन नै आधिकारिक भएकाले केन्द्रीय कार्यालय पनि स्वभाविक रुपमा आफूहरुकै हुने दाबी संगठनका महासचिव शरण गुरुङले गरेका छन् ।
बबरमहलमा रहेको संगठनको केन्द्रीय कार्यालय आफूहरुको प्रयासमा बनेको महासचिव गुरुङले बताए । उनले भने ‘हामीले तिरेको लेबीले बनेको कार्यालयमा हामीलाई रोक्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा गरेको प्रदर्शन प्रसंशायोग्य : खेलकुद मन्त्री गहतराज
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा गरेको प्रदर्शनप्रति सन्तुष्ट व्यक्त गरेका
किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका–१ तीनजुरेमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु
यस्तो छ एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी र नेताहरूको कार्यविभाजन (विवरणसहित)
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएसँगै नेताहरूको कार्यविभाजन समेत तोकेको छ
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कम्युनिष्ट नेता मोहन वैद्य अस्पताल